Adigaaga ka qeyb qaadanaya damaanadqaadka shaqada-iyo horuumarka ama barnaamijka saldhigashada waa ka qeyb qaadan kartaa waxbarasho dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn oo ku jihaysan xirfad baahi shaqaale ay ka jirto.
Dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn oo xirfad ku jeeda wuxuu kor u qaadayaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Waxbarashooyinka xirfadaha ee jira waxaa xukuma xirfadaha baahi shaqaale oo badan ay ka jirto. Waxbarashada waxaa la soo saarayaa iyadoon iskaashaneyno dugsiyada shacbiga ee dadka waaweyn iyo annagu. Waxbarashadu ma damaanad qaadi karto in aad shaqo heleysid, laakin si fiican ayey u hagaajineysaa fursadahaaga.
Qaabka waxbarashadu u soconeyso wey kala duwantahay, laakin waxa ay ka simanyihiin waa in waxbarashooyinka ay ka koobanyihiin qeyb weyn oo tababar shaqo ah. Dugsiyada shacbiga ee dadka waaweyn waxay ka shaqeeyaan kooxo waxbarasho, oo yar-yar oo ishaysta waxayna leeyihiin aragti aan cilmi gaar ah ku koobnayn.
Waxbarashadu waa waqti buuxa, badanaana waxaa la dhigtaa ku dhawaad hal sano. Waxbarashada dhererkeeduse wuu kala duwanaan karyaa, inta u dhexeysa ku dhawaad 6-24 bilood.
Waxyaabo badan ayaa saameynaya fursadahaaga ku aaddan in aad dugsiga shacbiga ah ee dadka waaweyn ka dhigatid waxbarasho xirfad ku jiheysan. Waxaan miisaanka isla saareynaa waxbarashooyinkaagi iyo khibradahaagi hore, fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid iyo sida baahida suuqa shaqadu ay u muuqato.
Waxaad u baahantahay in aad shaqadoon ahaan nooga ag qorantihid. Waxaa xitaa lagaaga baahanyahay inaad buuxiso mid ka mid ah arrimahan:
In aad ka qayb qaadatid jobb- och utvecklingsgarantin.
In aad ka qeyb qaadatid etableringsprogrammet.
Waa annaga cidda si wadajir ah kuula qiimeyneyna haddii waxbarashada dugsiga shacbiga ah ee dadka waaweyn ee ku jeedda xirfaddu ay kugu habboontahay.
Waxaan baareynaa waxbarashada iyo dugsiga shacbiga ee dadka waaweyn ee ku khuseyn kara, kuguna habboon.
Sida aad waxbarashada u codsaneysid wey kala duduwantahay. Codsi qoraal ah oo wareysi lagu dhameystiray ayaa caadi ah.
Waad qaadan kartaa taageero dhaqaale inta aad ka qeyb qaadaneysid jobb- och utvecklingsgarantin ama etableringsprogrammet. Waxaad heli kartaa lacag kaalmo ah oo aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning. Inta aad dhiganeysid waxbarashada ku jeedda xirfadda ee dugsiga shacbiga ah ee dadka waaweyn waad haysaneysaa lacagti aad ku qaadan jirtay barnaamijyadeenna.
Waxaad ku jirtaa ceymiska dhaawaca qofka iyo kooxda marka aad dugsiga shacbiga ee dadka waaweyn uga qeyb qaadaneysid waxbarasho xirfad ku jihaysan.
Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta
Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.
Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.
Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.